China 5445 Umthamo ophakamileyo wekhaphethi yokuhambisa amanzi ashushu kwimizi nakwiindawo zomsebenzi mveliso kunye nabenzi | Icebo lokucoca ulwelo
Isixhobo sokuhambisa amanzi eshushu esinga-5445 esiphakamileyo sokuhambisa amanzi ashushu emakhaya nakwiindawo zokusebenzela
Fumana amanzi acocekileyo kwaye acociweyo abilayo ngokuthe ngqo kwindebe yakho ngokuqhwanyaza kweliso.
Ukukhawuleza ukubilisa kwimizuzwana emi-3, akusekho kulinda ecaleni.
Amaqondo obushushu ohlukeneyo kunye nezixa zamanzi ezikhoyo ukuze zisetyenziswe yonke imihla.
Itanki enkulu yamanzi eyongezelelweyo, akukho mfuneko yokugcwalisa rhoqo.
Ukuboniswa kwe-TDS ukubonisa, khangela ngokulula umgangatho wamanzi ocociweyo.
Faka isibonisi esifanelekileyo sokukwazisa ukuba uza kuyithatha nini indawo yokuhluza.
Ukuzihlamba ngokwakho ngokukuko ukuqinisekisa ukubonelelwa rhoqo kwamanzi amatsha avela kwifowuni.
Iza ngoyilo olungqongqo kunye nesitayile, akukho fakelo lukhethekileyo lufunekayo.
Thumela i-imeyile kuthi Khuphela iNcwadana yemiyalelo
Ukhetho lwakho lokuqala lokusela kosapho
Ukufudumeza ngokukhawuleza kwimizuzwana emi-3
Ukubilisa ngokukhawuleza kukuvumela ukuba wenze ikomityi yekofu kwimizuzwana emi-3
Amanqanaba amaninzi, ukuSebenza okungcono kokuHanjiswa
Isixhobo asifuni naluphi na ufakelo, vele ufake iplagi kwaye uqalise ukuyisebenzisa
Ukukhawuleza ukubilisa, ukuGcina amandla
Esi sisixhobo samanzi eshushu nangoko sinika amanzi ashushu ngqo kwindebe yakho, kungoko kungasayi kuphinda kulindwe iketile ukuba ibile. Ukubilisa ngokukhawuleza kukuvumela ukuba wenze ikomityi yekofu kwimizuzwana emi-3. Njengokuba ibila isixa esifanelekileyo samanzi osifunayo, xa kuthelekiswa neketile yesintu ebilisa amanzi, lo mthombo wamanzi oshushu okhawulezileyo ugcina isixa esikhulu samandla, esonga umbane, esilungele amakhaya neendawo zokusebenzela apho kufuneka kuncitshiswe ukuphuma kwamandla.
Esi sisixhobo samanzi eshushu kwangoko sisebenzisa itekhnoloji yokuhluza edityanisiweyo edibanisa iintlobo ngeentlobo zeefayile zokucoca ukuze zisebenze ngokukuko. Icebo lokucoca ulwelo le-CF line-sediment ye-PP enyibilikisiweyo evaliweyo kunye nebhlokhi yentsimbi esebenzayo ukuze kususwe amasuntswana amakhulu ekuqaleni kunye neklorine emanzini. Inqanaba le-MRO libandakanya inwebu yokubuyela umva ye-osmosis, ibhlokhi yentsimbi esebenzayo kunye ne-PP inyibilike ivuthelwe ukunciphisa ukungcola okunje nge-TDS kunye nesinyithi esinzima.
Iplagi kunye nokudlala, ukuhamba ngokuHlobo
Isixhobo asifuni naluphi na ufakelo, vele ufake iplagi kwaye uqalise ukuyisebenzisa. Ke inokuhlala nje naphi na phezu komphezulu wetafile okude kude kumthombo wamanzi, njengegumbi lokuhlala, igumbi lokutyela, igumbi lokuzonwabisa, njl.njl. ukutshintsha indawo.
Itanki enkulu, ukugcwalisa kancinci
Isixhobo sokuhambisa amanzi ashushu kwangoko siza kunye nomthombo omkhulu osuswayo ukuya kuthi ga kumthamo we-1.5L, enkulu ngokwaneleyo yokufumana i-3L yamanzi ngokuqhubekayo (ukuvelisa amanzi ngelixa ufumana amanzi), ke akukho sidingo sokugcina ukugcwalisa rhoqo. Kufuneka ukhuphe itanki yamanzi kwaye uyigcwalise ngamanzi nangaliphi na ixesha ukuphuma kwamanzi. Ngaphandle koko, itanki lamanzi lenziwe licacile ukuze ubone ngendlu yeplastiki unokuxela ngokulula inqanaba lamanzi naxa ifuna ukugcwaliswa kwakhona.
Ubukhulu 435 × 178 × 395mm
Iqondo lobushushu emanzini 5-38 ℃
Ukunikezwa Amandla I-220V / 50HZ
Uqwalaselo lokucoca ulwelo ICF (PP + CB) + MRO (RO + CB + PP)
Ixabiso lamandla 2200W
Umthamo wetanki lamanzi 1.5L
Umgangatho wohambo 0.2L / min (75G)
Isantya sokuhamba kwamanzi ashushu (95 ° C) 0.4-0.5L / min
Indlela yokufudumeza Ukutshisa ifilimu eshinyeneyo
Egqithileyo Indlu yonke yoLulutho lweeNdawo eziCoca iMeltblown
Okulandelayo: 5290 Backwash Ukusebenza okuPhezulu kweNdlu Inkqubo yokuHlulwa kwaManzi kwakhona
Itafile ephezulu yokuCoca uManzi
Isixhobo sokuhambisa amanzi esisihluziweyo
Indawo yokusebenzisa isihluzi samanzi
Isihluzi samanzi esilula
IsiCoci saManzi esiSilumko
Itheyibhile yokuCoca amanzi
Umcoci wamanzi weTafile
Icebo lokucoca amanzi kunye wekhadi
Umcoci wamanzi kunye nokuhambisa
Umcoci wamanzi oSetyenziselwa iKhaya
Unyango lwaManzi oluQinisekisiweyo ngo-5677 ...
5659 I-Countertop ye-UF yokucoca amanzi
Unyango lwaManzi oluQinisekisiweyo ngo-5673 ...
Isixhobo sokuhambisa amanzi eshushu esisebenza ngokukhawuleza
I-5131 ye-10-indebe yokuCoca amanzi
Eyona Ndlela yokuBuyisa iOsmosis, Indlu yonke yokuCoca uManzi, Umcoci wamanzi waManzi aKhuni, Cofa inkqubo yokuCoca amanzi, Hluza iCartridge, Ukutshintshwa kweFilitha yeCartridge yaManzi,